Ihe ịrịba ama nke ịchọta - ịhapụ
Ihe ịrịba ama nke ịmalite ịmụ nwa bụ mfe ịghọta onwe gị. O zuru ezu ịmara nanị akụkụ ole na ole nke usoro nke mbụ na nke abụọ nke oge ịhụ nsọ, ma nwee ike ige onwe gị ntị. Ọ bụrụ na ọkpụkpụ gị na-adịgide adịgide mgbe niile ma ọ dịghị ihe mgbochi hormonal, mgbe ahụ, ezi nyocha nke ịchọrọ nwa maka excreta ruru 90%.
Kedu otu esi ekpebi ovulation maka excreta?
Iji chọpụta nwa nwa, ọ bụ naanị mkpa ịmara ihe nzuzo dị na nke a ma ọ bụ oge nke oge ahụ. Ozugbo ngwụsị nke nsọ nsọ, na-adịkarị n'ime ụbọchị ole na ole, nwanyị ahụ adịghị achọpụta ihe nzuzo ọ bụla sitere na tract genital. Otú ọ dị, dị nso n'etiti etiti ahụ, mmetọ ahụ na-abawanye ụba, mmiri mmiri mbụ, wee bụrụ nke nnyapị. Nke a bụ n'ihi ngbanwe nke homonụ na ahụ, nakwa nke mmeghe nke cervix.
Nkwụsị na ụbọchị ịchọrọ azụ ga-enweta àgwà nke nje ahụ viscid, nke nwere ike ịhapụ ya na nnukwu lumps. Mmetụta a na-emepụta na tract genital ọnọdụ dị mma maka ọganihu nke spermatozoa na egg, ya mere a na-akpọ nri. Slime nwere ike na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha aja aja na agba, nakwa dị ka pink veins. Ozugbo ochusịrị gafere, a kpochapụrụ imi ahụ, na dịka iwu, ụmụ nwanyị anaghị achọpụta ihe ọ bụla ọ bụla ruo na njedebe nke oge ahụ.
Nkọwa nke ovulation maka excreta nwere oke ziri ezi, ma ọ bụrụ na nwanyị maara kpọmkwem otú e si amata ọdịiche nke otu oge site na onye ọzọ, ma na-ele anya nzuzo n'oge niile.
A na-akpọ ihe ịrịba ama ndị na-eme ka a ghara ịmịpụ nwa mgbe a na-ekpuchi ụmụ mmadụ ka ha nwee ike ịmịpụ ọbara ọbara, nke a na-ejikọta ya na ịmalite ịmịnye ihe mgbu n'akụkụ, n'akụkụ ovary ebe ovulation na-apụta. Ị nwekwara ike chọpụta eziokwu nke ịzụ nwa site n'enyemaka nke nlereanya pụrụ iche (maka mmiri na mmamịrị), ma na-echekwa okpomọkụ basal kwa ụbọchị. Nchikota nke ụzọ ndị a na-enye gị akaebe na ị ga-amatapụta mmalite nke ịzụ nwa.
Enwere ovulation na-enweghị mmetụ?
Ọnọdụ nke hormonal nke nwanyị adịghị eguzosi ike, site n'oge ruo n'oge, dịka nke sitere n'ime ụlọ ma ọ̄ bụ ọbụna ihe ndị dịpụrụ adịpụ, dịka nchekasị ma ọ bụ ihe oriri, enwere ike inwe ihe nhụjuanya. Tụkwasị na nke ahụ, ọ ga-enwe ike ịdị na-eme njem elekere 1-2 nke ọ bụla n'emeghi ntughari. Ya mere, ọ na-emekarị na n'ime oge dum nwaanyị ahụ anaghị achọpụta mgbanwe ọ bụla. A na-enwekwa ovulation n'emeghị ka ọpụpụ dị n'etiti etiti ahụ.
Esi kee nwa agbọghọ - otu ụzọ n'ụzọ iri
Ịgba akpanwa - mgbaàmà
Elevit Pronatal na ime atụmatụ ime
Enwetakwu prolactin na ụmụ nwoke
IVF - olee otu nke a si eme?
Endometriosis na afọ ime
Egwuregwu na-akpali akpali na-akpali akpali bụ ụkpụrụ ụmụ nwanyị
Mbadamba maka ime ime na ime
Ịdị mma mgbe embrayo na-agafe
Echere m ya n'onwe m - ewere m iwe
Salad na sprats
Kedu ka m ga-esi nyere ekwentị m aka n'enweghị iwu?
Uwe a na-eke ejiji
Lady Gaga ghọrọ heroine nke mkpesa ahụ
Pọọks na topaz
Ihe ndị a geometric bụ ezigbo ọrụ nke nkà!
Salad na agwa na tomato
Mmanụ aṅụ mmanụ aṅụ
Sofia Vergara nwere obi ụtọ n'oge ime
Karịa ịnagide akpịrị na nwa?
Idine Radioactive - ọgwụgwọ dị mma nke gland thyroid
Sneakers akpụkpọ ụkwụ
17 n'ime ime ụlọ ị chọrọ ugbu a
Karịa iji ehichapụ ihe n'aka kozhzama?
Ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ: 25 creepy photos si ese foto